Soo dejisan Advanced System Tweaker 2 – Vessoft
Soo dejisan Advanced System Tweaker
System Advanced Tweaker – software ah in ay dadajiso shuqulka aad computer by dejinta xubno ka kala duwan ee nidaamka qalliinka. System Advanced Tweaker ku jira qalab badan oo ay ku reserved goobaha diiwaangelinta, line amarka iyo faylasha VBScript. Barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa reserved qaybaha kala duwan ee nidaamka si ay u siiyaan kalsooni ku badnaan iyo wax soo saarka shaqada ee kombiyuutarka. System Advanced Tweaker awood u siineysaa inay baadhaan goobaha kala duwan ee liiska si joogto ah sii kordhaysa iyo dooran tirada la doonayo ee qalab loogu tala galay in ay tayadoodii nidaamka.
Settings waxqabadka nidaamka
La shaqee line amarka, faylasha diiwaanka iyo VBScript
Joogto liiska goobaha kordhaya
Comments on Advanced System Tweaker:
Advanced System Tweaker Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... CCleaner 5.22.5724 Standard, Professional iyo Portable
Ayna System Agabka in la baadho oo la saxo khaladaadka ku jira nidaamka. Sidoo kale software awood u siineysaa inay defragment drive adag.
العربية, English, Français, Español... Google Chrome 54.0.2840.59 iyo 55.0.2883.7 dev
العربية, English, Українська, Français... Mp3DirectCut 2.22
Українська, Français, Español, Deutsch... IObit Uninstaller 6.0.2.156
العربية, English, Українська, Français... UMPlayer 0.98